#‎သိန်းစိန်အစိုးရသို့‬ – ‪#‎ကျေးဇူးတင်လွှာ‬ – | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မင်းတို့ တိုင်းပြည်အပေါ် တကယ် စေတနာရှိရင် ပညာရေးကို မြှင့်တင် တော်သူကို ချီးမြှောက် ဘာသာ လူမျိုးမခွဲနဲ့
မဘသဆရာတော်များအနေနဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးကြရင် အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့ရဲ့ အသုံးချခြင်းကို မခံမိစေဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း »
#‎သိန်းစိန်အစိုးရသို့‬ – ‪#‎ကျေးဇူးတင်လွှာ‬ –
အ ကြောင်း အ ရာ – ‪#‎ကျေးဇူးတင်လွှာ‬ –
မြန် မာ ပြည် တ လွှား မှာ အ စ္စ လာမ် နဲ့ ဗု ဒ္ဓ ဘာ သာ ဝင် မြန် မာ နိုင် ငံ သား အ ချင်း ချင်း ကို အိုး မဲ သုတ် – ရန် တိုက် ပေး ပြီး သွေး ထွက် သံ ယို အ ဓိ က ရုဏ်း ကြီး တွေ ကို နိုင် ငံ အ ဝှမ်း မှာ မ ဖြစ် ဖြစ် အောင် ဖန် တီး ခဲ့ တဲ့ လက် တစ် ဆုပ် စာ ခွေး ဒ လံ များ က လဲ အ ခု လက် ရှိ သုံး နှုန်း သွား တဲ့ ” အ ရပ် ဝတ် အ မျိုး သား ” ဆို တဲ့ ခွေး ဒ လံ များ သာ ဖြစ် တယ် – ဒီ ခွေး ဒ လံ တွေ က ပဲ အ ခု လို မိ ဘ ပြည် သူ များ နှ ဖူး တွေ့  ဒူး တွေ့  တွေ့  ရ ကြုံ ရ တော့ မှ ပဲ အ စ္စ လာမ် က ဘယ် တော့ မှ ရန် မ စ ဘူး ဆို တာ ကို လက် ခံ နိုင် ကြ လိမ့် မယ် လို့ ယူ ဆ မိ တယ် – ဒီ ခွေး ဒ လံ တွေ က ဘယ် လို အ စ ဆွဲ ထုတ် ပြီး ရန် မီး ထိုး ကြောင်း ကို ကျုပ် တို့ အ စ္စ လာမ် ဘာ သာ ဝင် များ ဘက် မှ မည် သို့ ပင် ဖြေ ချ ရှင်း လင်း ပြ နေ ပါ စေ မိ ဘ ပြည် သူ တို့ ဘက် မှ သို့ လော သို့ လော သံ သ ယ ဝင် နေ ဆဲ ပါ ဘဲ – အ ခု တော့ အား လုံး ရှင်း သွား ပါ ပြီး – ကျုပ် တို့ အ မိ နိုင် ငံ တော် ရဲ့  အ ဓိ က သ မိုင်း တ ရား ခံ ဘုံ ရန် သူ က အ စ္စ လာမ် လား ? ဘယ် ခွေး ဒ လံ လဲ ? ဆို တာ ကို အ ဖြူ အ မဲ ခွဲ ပေး လိုက် တဲ့ သိန်း စိန် အ စိုး ရ ကို အ ထူး ပဲ ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ် လို့ ဤ နေ ရာ လေး မှ ကျေး ဇူး မှတ် တမ်း တင် လိုက် မိ ပါ ရဲ့  –
– ” သျှင် သ ရ ” –
မှူးဇော်က ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ၁၂၇ ၁၂၈ နဲ့ ကိုင်ပြီးဖာတယ် ။
နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး အရ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့် စီတန်း ဆန္ဒပြခွင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ် ။ မင်းတို့ စည်ပင်ဝန်းထဲမှာ နေ့လည် ၂နာရီထဲကစုနေတယ် ။ ဒီဘက်က ထိုင်သပိတ် လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ကားလမ်းကူးပြီးလာတယ် ။ မင်းတို့လူအုပ်ဘက်က ရန်စတယ် ၊ အလံလာလုတယ် ။ ပြီးတော့ရဲက ဝင်ရိုက်တယ် ။ ဘယ်သူရန်စသလဲ ဘယ်သူစကျူးလွန်တာလဲ ။ ဥပဒေ ဆိုတာ တရားသူကြီး က ယူဆတယ်ဆိုရုံနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး Logically ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိရလိမ့်မယ် ။ ဟေ့ ဘုရားပွဲမှာ လူစည်နေတယ် ရိုက်ကွာ ဆို မခက်ဘူးလား ။
အခု မင်းတို့က ကလေကချေတွေ ဆိုက်ကားသမားတွေကို ကြံ့ဖွတ်တွေကတဆင့်တနေ့ ၅ထောင်ပေးခေါ်ပြီးရိုက်ခိုင်းတာ ….
တရာခံဟုယူဆတဲ့မိန်းကလေးကို ရဲယောက်ျားသားများ ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ဖမ်းဆီးခွင့်မှာတောင် ၀ရမ်းမပါဘဲ ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခွင့်မရှိပါဘူး။
ရဲအရေးပိုင်ကိစ္စရပ်တွေမှာတောင် တာဝန်အရပေမဲ့ ရှောင်လွဲကန့်သတ်ပေးထားပါတယ်။
ရဲမဟုတ်သူ တာဝန်မဲ့ယူနီဖောင်းမပါသူက မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ကာအိနြေ္ဒပျက်ပြားစေရန် ပြုမူပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ဒီလိုလုပ်ရပ်ကို ဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းက လူငှါးပြီး
ပြောင်ပြောင်ထင်ထင်ချိုးဖောက်တာဟာ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုသက်သက်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းကို အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ပြောင်ပြောင်ထင်ထင်ချိုးဖောက်တာသာဖြစ်ပါတယ်။
သိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ တရားဥပဒေ ဆိုတာ ဒါလား.. တောက် ! နှမချင်း မစာမနာ အသားယူ ယုတ်မာနေတာ… အဓိကရုံးထိန်းသိမ်းရေး လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို လခပေးထားတာ ဘာလုပ်ဖို့လဲ ။ ရဲတပ်ဖွဲ.ထက် အာဏာရှိနေသည့် လက်မည်းကြီးလူမိုက်ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းကိုဘယ်သူမွေးထားသလဲ၊ မြို.တော်ကြီးအလယ်မှာနေ.ခင်းအချိန်သာသာ ဒီလိုရမ်းကားပြီး တုတ်တွေနဲ.၊ဓါးတွေနဲ.ကိုင်ဆောင်ပြီးပြည်သူလူထုကိုရဲရှေ.မှာထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ရဲတဲ့လူမိုက်ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းကိုဘယ်သူခိုင်းထားသလဲ၊သိန်းစိန်းစစ်အစိုးရဖြေရှင်းပါ၊အရပ်သားလွှတ်တော်လို.အော်အော်နေသည့်လွှတ်တော်အမတ်များဖြေရှင်းပါ၊ ပြည်သူ.လစာစားနေသည့် ရုပ်သေးအမတ်တွေ၊ပရောဟိတ်တွေဘယ်ကိုရောက်နေသလဲ၊ ခင်ဗျာတို.မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင် အားလုံးနှုတ်ထွက်ကြပါ၊တာဝန်မယူရင် အားလုံးနှုတ်ထွက်ကြပါ၊
This entry was posted on March 7, 2015 at 5:53 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “#‎သိန်းစိန်အစိုးရသို့‬ – ‪#‎ကျေးဇူးတင်လွှာ‬ –”
drkokogyi Says:	March 7, 2015 at 7:43 am | Reply စွမ်းအားရှင်တွေကို အသုံးချမှု လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်း HRW အဖွဲ့ပြော
ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ထောက်ခံ ဆန္ဒပြသူတွေကို အရပ်ဝတ်စွမ်းအားရှင်တွေကို ကြားခံ အနေနဲ့ အသုံးချခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ တာတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးအရ လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာ မရှိကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့ကြီး Human Rights Watch က ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
မနေ့ညက ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဆန္ဒပြနေ တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ အရပ်ဝတ် စွမ်းအားရှင် လူငယ်တွေကို အသုံးချပြီး နှိမ်နင်းဖမ်းဆီး ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ HRW ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သုတေသနမှူး David Mathieson က RFA နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ အခုလို ဖြေကြားလိုက် တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးဖြိုခွဲတာမျိုးဟာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်သလို အစိုးရအနေနဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဆွေးနွေးဖြေရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အနေနဲ့ အင်အားသုံးရိုက်နှက်တာမျိုးဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုရော၊ အစိုးရကိုပါ နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းက ရှုတ်ချဖို့သင့်ပါတယ်လို့ Mr. Mathieson က ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှာလည်း တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ အရပ်ဝတ် စွမ်းအားရှင်လူငယ်တွေကို ကြားခံလုံခြုံရေးအဖြစ် ရဲတပ်ဖွဲ့က အသုံးချခဲ့တာဟာလည်း နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့စံတွေနဲ့ မကိုက်ညီကြောင်း၊ ဒီလုပ်ရပ်အပေါ်မှာ ဥရောပသမဂ္ဂ လို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို နှစ်ချီလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေက ဦးဆောင် ကန့်ကွက်ရှုံတ်ချသင့်ကြောင်း လည်း သူကပြောပါတယ်။ @ http://www.rfa.org/burmese/news/hrw-denounce-police-use-guys-with-red-armbands-03052015223411.html